Sevha maeuro zana pakutenga yako 100-inch 27K iMac | Ndinobva mac
Nezuro isu tanga tichitaura nezve sarudzo yekutenga nyowani MacBook Air Iine processor yeM1 iyo dhisikaundi, nhasi tinoda kuunza imwe inonakidza dhisikaundi ye € 100 pakutenga iMac nyowani. Mune ino kesi iri 27-inch 5K iMac Retina ine 8GB ye RAM uye 256GB SSD yekuchengetedza mukati.
Zvine musoro, chimbo ichi chine dhizaini yekare asi iwo 27-inch mamodheru haawanikwe neyekugadzira nyowani Zviripachena zvikwata izvi zvakare Intel processors akawedzera Ivo havana maApple M1 mukati asi iri harisi dambudziko nekuti vanoshanda chaizvo.
Pano unogona kuwana iyi 27-inch iMac ine 100 euro dhisikaundi
Tenga iMac-27-inch iMac izvozvi?
Uyu ndeimwe yemibvunzo iyoyo yatinobvunzwa zvakanyanya uye zvinonetsa kupindura nekuda kwezvikonzero zvakati. Chekutanga ndechekuti Hazvisi pachena kuti Apple ichatanga riini idzva 27-inch iMac modhi uye zvakati wandei zvinozivikanwa mutengo uchave neizvi, maratidziro, nezvimwe ... Saka kutora mukana wechero kupihwa kupi kwatinogona kuwana pamambure kunogona kugara kwakanaka kana tichifanira kuwana imwe yeiyi iMac.
Semazuva ese, chinhu chakakosha kuona kana iwe uchinyatsoda ichi chishandiso izvozvi kana iwe unogona kumirira kusvika kutengwa kweiyo nyowani modhi.. Mira iwe unogona kugara uchizviita sezvo uriwe unosarudza, zviri pachena kana iwe uchida michina iwe yaunofanirwa kuwana yakanakisa yekutenga sarudzo uye mune ino kesi ndoichi. Chero bedzi isu tikachengeta mari shoma pakutenga kweApple chishandiso inogamuchirwa uye 100 euros inoita kunge isina kutaurwa nenzira iyoyo, asi imari yakanaka yekuchengetedza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac makomputa » IMac » Sevha maeuro zana pakutenga yako 100-inch 27K iMac